China sy mpamatsy boribory ankehitriny Pendant Light HL60L09 sy mpamatsy | Haus Lighting
Material: Aluminium + akrilika
Toro-lalana mamirapiratra: midina
Driver: UL / TUV / SAA Mpamily ekena (mpamily LED Lifud)
Aluminium + akrilika
1.5 metatra (fenitra)
Diameter 1000mm na habe lehibe kokoa misy, mifandraisa aminay malalaka.
Fanamafisana ny antsipiriany amin'ny sary - Debarring / bobongolo-lavaka fanodinana- Fanokafana -CNC machining- Ivon-toerana fanaraha-maso CNC- Polishing- Famaranana eo an-tampon'ny -Fitsapana fahanterana sy fitsapana leakage avo lenta- Fanaraha-maso kalitao- Fonosana- Fandefasana.
Jiro haingon-trano anatiny ao an-trano, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fatoriana, efitrano fisakafoanana. Malaza ihany koa ho an'ny faritra pubic, toy ny lobby hotely misy jiro marobe, hazavana tohatra ary faritra maro kokoa.
• Maherin'ny 8 taona ny famokarana sy ny fanondranana traikefa amin'ny indostrian'ny jiro, manome ny mpanjifanay kalitao afa-po sy vidiny mifaninana tsara.
• Miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 40 voaofana tsara sy traikefa manankarena, ny mpiasa tompon'andraikitra dia afaka manome antoka ny fifandraisana, kalitao, fonosana, fotoana fandefasana ary manome serivisy tsara mialoha sy amidy.
• Ny efitrano fandraisam-bahiny tsara tarehy dia mihoatra ny 150 metatra toradroa, mampiseho ireo endrika farany fanaovan-jiro amin'ny fomba, fitaovana, habe.
• Ekipa injeniera fikarohana sy matihanina matihanina misy olona 5 no manolotra ny drafitra CAD sy 3D horesahina.
• Ekipa mpivarotra matihanina sy tsara any ivelany izay misy olona mihoatra ny 4 dia manome fifandraisana mora kokoa, miasa mafy ary valiny haingana ao anatin'ny 3 ora.
• Zotra famokarana 3 sy fahaizan'ny famokarana matanjaka hanohanana ny serivisy OEM & ODM. afaka manampy anao hamolavola sy hametraka amin'ny vokatra izahay.
• Manondrana vokatra mahazatra miaraka amin'ny CE, ROHS, VDE, SAA, singa miaraka UL, ary CUL.
Karama sy fandefasana
• Fampahalalana momba ny fandefasana: ao anatin'ny 25-45 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko.
Manaraka: Kavina volamena pendant hazavana HL60L10